Kwadwom 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Wɔkaa Yerusalem ho asɛm sɛ okunafo
Wɔagyaw no hɔ; aka ɔno nko ara te hɔ (1)
Bɔne akɛse a Sion ayɛ (8, 9)
Onyankopɔn apo Sion (12-15)
Obiara nni hɔ a ɔbɛkyekye Sion werɛ (17)
א [Aleph]* 1 Kurow* a anka nnipa ayɛ mu ma no,+ hwɛ sɛnea aka ɔno nko ara te hɔ! Ɔbea a na ɔwɔ dɔm sen aman nyinaa no,+ hwɛ sɛnea wayɛ sɛ okunafo! Nea na ɔyɛ amanaman mu ɔhemmaa no, hwɛ sɛnea wadan abaawa!+ ב [Beth] 2 Edu anadwo a, osu ara na osu,+ na ne nisu tene fa n’afono ho. N’adɔfo nyinaa, ɔbaako mpo nni hɔ a ɔbɛkyekye ne werɛ.+ Ne nnamfo nyinaa ayi no ama;+ wɔadan n’atamfo. ג [Gimel] 3 Wɔatu Yuda ase kɔ obi man so,+ na amanehunu ne nhyɛso amene no wɔ nkoasom mu.+ Amanaman mu na ɔbɛtena;+ ɔrennya homebea biara. Wɔn a wɔretan n’ani nyinaa akɔto no n’amanehunu mu. ד [Daleth] 4 Akwan a ɛkɔ Sion redi awerɛhow, efisɛ obiara mma afahyɛ no ase.+ N’apon nyinaa asɛesɛe;+ n’asɔfo regu ahome. Ne mmaabun* redi awerɛhow, na ɔreteetee paa. ה [He] 5 N’atamfo abɛyɛ ne wura;* wɔn a wɔmpɛ n’asɛm ho adwo wɔn.+ Efisɛ Yehowa de awerɛhow aba no so, ne mmarato bebrebe no nti.+ Atamfo akyere ne mma de wɔn kɔ.+ ו [Waw] 6 Sion babea anuonyam nyinaa atu ayera.+ Ne mpanyimfo ayɛ sɛ awansan a wonnya adidibea;Wɔayɛ hahaaha nenam nea ɔretan wɔn ani no anim. ז [Zayin] 7 Yerusalem amanehunu ne n’adedamfikyiri nna mu no, Wakae kan nna no mu nneɛma a ɛsom bo a na ɛyɛ ne de no nyinaa.+ Bere a ne manfo kodii atamfo nsam na wannya ɔboafo no,+Atamfo huu no, na wɔserew no wɔ n’ahwease no ho.+ ח [Heth] 8 Yerusalem ayɛ bɔne kɛse paa.+ Ɛno nti na wadan biribi a ɛyɛ tan no. Wɔn a na wɔde nidi ma no no, seesei wɔn nyinaa bu no akyiwade, efisɛ wɔahu n’adagyaw.+ Ɔno ara nso redi abooboo,+ na ɔde aniwu adan ne ho kɔ. ט [Teth] 9 Efĩ a aba ne ho no akeka n’ataade mu. Wannwen ne daakye.+ Wahwe ase ama ayɛ nwonwa; onni obiara a ɔbɛkyekye ne werɛ. O Yehowa, hwɛ m’amanehunu, na ɔtamfo ama ne ho so.+ י [Yod] 10 Ɔtamfo no de ne nsa ato n’agyapade nyinaa so.+ Efisɛ wahu* sɛ amanaman awura ne tenabea kronkron hɔ,+Aman a wokae sɛ wɔmmma w’asafo mu no. כ [Kaph] 11 Ne nkurɔfo nyinaa regu ahome; wɔrehwehwɛ aduan.+ Wɔde wɔn nneɛma a ɛsom bo asesa aduan sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛtena nkwa mu kɛkɛ.* O Yehowa, hwɛ na hu; mayɛ sɛ ɔbea* a mfaso biara nni no so. ל [Lamed] 12 Mo a moretwam ɔkwan no so nyinaa, enti ɛmfa mo ho? Monhwɛ na munhu! Enti ɛyaw bi wɔ hɔ a ɛte sɛ ɛyaw a aka me yi,Ɛyaw a Yehowa ma mefaa mu n’abufuhyew da no?+ מ [Mem] 13 Ɔde ogya fi soro abɛto me nnompe mu,+ na wadi ebiara so nkonim. Ɔde atena asum me nan afiri; wama masan m’akyi. Wama mayɛ ɔbea a ɔyɛ ankonam. Ɔyare abɔ me da mu nyinaa. נ [Nun] 14 Wakyekyere me bɔne sɛ kɔndua; ɔde ne nsa akyekyere abom. Ɔde ato me kɔn ho; m’ahoɔden asa. Yehowa de me ahyɛ wɔn a mintumi wɔn no nsa.+ ס [Samekh] 15 Yehowa atow mmarima a wɔn ho yɛ den a wɔwɔ me mu no nyinaa agu.+ Wafrɛ ɛdɔm ahyia sɛ wɔmmɛyam me mmerante.+ Yuda babea, ɔbaabun no, Yehowa atiatia no so wɔ amoa a wokyĩ nsã wom mu.+ ע [Ayin] 16 Eyinom nti na meretew nisu yi;+ nisu resen fa m’ani ase waawaa. Nea ɔbɛkyekye me werɛ na wama manya* ahomeka no wɔ akyirikyiri; ɔmmɛn me. Me mma anidaso nyinaa asa, efisɛ ɔtamfo no adi nkonim. פ [Pe] 17 Sion atrɛw ne nsam;+ onni ɔwerɛkyekyefo biara. Yehowa de ahyɛde bi a etia Yakob ama n’atamfo a wɔatwa ne ho ahyia nyinaa.+ Yerusalem adan ade a ɛyɛ tan ama wɔn.+ צ [Tsade] 18 Yehowa teɛ,+ na n’ahyɛde* na matew so atua.+ Aman nyinaa muntie, na munhu yaw a merefa mu. Wɔakyere me mmaabun* ne me mmerante kɔ.+ ק [Qoph] 19 Mefrɛɛ m’adɔfo, nanso wɔayi me ama.+ M’asɔfo ne me mpanyimfo awuwu wɔ kurow no muBere a wɔrehwehwɛ biribi adi atena nkwa mu* no.+ ר [Resh] 20 O Yehowa, hwɛ, na m’amanehunu so. Me nsono mu retwa me. Me koma yɛ me yaw wɔ me mu,* efisɛ matew atua kɛse.+ Abɔnten a, sekan redi awu;+ ofie nso a, owu nko ara. ש [Shin] 21 Nkurɔfo ate m’ahomegu; obiara nni hɔ a ɔbɛkyekye me werɛ. M’atamfo nyinaa ate m’amanehunu. Wɔn ani agye, efisɛ wo na woayɛ.+ Nanso wobɛma ɛda a woahyɛ no aba,+ na wɔn nso bɛyɛ sɛ me ara.+ ת [Taw] 22 Ma wɔn bɔne nyinaa mmedu w’anim, na wo ne wɔn nni no yayaayaw,+Sɛnea me bɔne nyinaa nti wo ne me dii no yayaayaw no. M’ahomegu adɔɔso, na me koma yare.
^ Ti 1 kosi 4 no yɛ awerɛhow nnwom a wɔde Hebri nkyerɛwde ahyehyɛ no nnidiso nnidiso.
^ Anaa “Yerusalem.”
^ Anaa “mmabaa.”
^ Nt., “abɛyɛ ne ti.”
^ Anaa “Yerusalem ahu.”
^ Anaa “wɔn kra benya ahomeka.”
^ Ɛyɛ Yerusalem na wɔreka ne ho asɛm sɛ onipa.
^ Anaa “me kra anya.”
^ Nt., “n’ano.”
^ Anaa “ama wɔn kra anya ahomeka.”
^ Anaa “Me koma adan abutuw wɔ me mu.”